ကျန်းမာရေးအာမခံ (Covid-19 အပိုဆောင်း အပါအဝင်)
နှစ်တိုပရီမီယံ တစ်ကြိမ်ပေး ချေးငွေအာမခံ
Inbound Travel Accident Insurance for visitors to Myanmar
Our Inbound Travel Accident Insured,aCOVID-19 and accident travel insurance plan specially designed for foreign visitors arriving in Myanmar
Operating hours are Monday to Friday (Excluding Public Holiday)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာမခံလုပ်ငန်းကို ၁၈၂၆ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး ဥရောပတိုက်သားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လာကြရာ ထို လုပ်ငန်းများအတွက် အာမခံအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၈၄၅ ခုနှစ်မှ ၁၈၉၇ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ ၁၈-ခု ရှိခဲ့ပါ သည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၀ ခုနှစ်ကာလအတွင်း အာမခံကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၁၀ အထိ ရှိခဲ့ရာ ယင်းတို့ အထဲတွင် ၁၉၃၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ -
(၁) ဆာဦးသွင်မှ ဥက္ကဌအဖြစ် တည်ထောင်သော မြန်မာပြည်အမျိုးသားအာမခံကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Burma National Insurance Co., Ltd.) နှင့်
(၂) ဒေါက်တာဦးဆက်မှ ဥက္ကဌအဖြစ် တည်ထောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ (အစိုးရ တာဝန်ခံချုပ်) အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟူ၍ မြန်မာကုမ္ပဏီ ၂-ခုသာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာ၍ အာမခံလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄)ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်သော ဒုတိယကြားဖြတ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ဘေးဥပါဒ် (အသက်၊ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်း) အာမခံနည်းဥပဒေ များကို ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြဌါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်.....
Myanma Insurance Mobile Application အား Google Playstore နှင့် App Store တွင် Download ရယူသုံးစွဲနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဤဥဒေကို မြန်မာ့အာမခံဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော...
၁။ ဤနည်းဥဒေများကို အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည်...
Have you any question? Ask Us anything, we’d love to answer!
Your Name / အမည်
Your Email / သင့်အီးမေးလ်
Your Phone Number / ဖုန်းနံပါတ်
Mail Recipient / အီးမေးလ်လက်ခံမည့် ဌာန
Customer ServicesLife DepartmentFire DepartmentMotor DepartmentCash Department
Your Message / သင့်စာလွှာ
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် မထားမနေရ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ... အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ အာမခံ Product... အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
COVID-19 အပိုဆောင်း ကျန်းမာရေး အာမခံအကာအကွယ် အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးခွဲမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ သေဆုံးလျော်ကြေး ပေးအပ်ခြင်း အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
အာမခံလုပ်ငန်းအသိပညာပြန့်ပွားရေးဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇